Nnwom 89 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa dɔ a enni huammɔ ho dwom
Apam a ɔne Dawid yɛe (3)
Dawid aseni betim afebɔɔ (4)
Nea Onyankopɔn asra no no frɛɛ no “m’Agya” (26)
Apam a ɔne Dawid yɛe no betim (34-37)
Obiara rentumi nnye ne ho mfi Ɔdamoa nsam (48)
Maskil.* Esrahini Etan+ dwom. 89 Mɛto Yehowa dɔ a enni huammɔ ho dwom akosi daa. Mede m’ano bɛka wo nokwaredi ho asɛm akyerɛ awo ntoatoaso nyinaa. 2 Efisɛ maka sɛ: “Ɔdɔ a enni huammɔ betim hɔ afebɔɔ,*+Na wo nokwaredi nso, woama agyina pintinn wɔ ɔsoro.” 3 Wokae sɛ: “Nea mapaw no no, me ne no ayɛ apam;+Maka ntam akyerɛ m’akoa Dawid+ sɛ: 4 ‘Mɛma w’aseni*+ atim afebɔɔNa mama w’ahengua ase atim wɔ awo ntoatoaso nyinaa+ mu.’” (Sela) 5 O Yehowa, ɔsoro kamfo anwonwade a woayɛ,Na akronkronfo asafo nso kamfo wo nokwaredi. 6 Hena na ɔte sɛ Yehowa wɔ ɔsoro?+ Hena na ɔne Yehowa sɛ wɔ Onyankopɔn mma+ mu? 7 Wonni Onyankopɔn ho agoru wɔ akronkronfo asafo mu;+Ɔyɛ kɛse na ne ho yɛ hu ma wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa.+ 8 O asafo Yehowa Nyankopɔn,Hena na ɔwɔ ahoɔden te sɛ wo, O Yah?+ Wo nokwaredi atwa wo ho ahyia.+ 9 Wo na wudi ɛpo a ehuru kutukutu no so;+Sɛ n’asorɔkye rebobɔ ba a, wo na woma ɛyɛ dinn.+ 10 Woabubu Rahab+ pasaa na woakum no.+ Wode wo basa a ɛyɛ den no abɔ w’atamfo ahwete.+ 11 Ɔsoro yɛ wo dea, na asaase nso yɛ wo dea;+Asaase a ɛma nnɔbae ne nea ɛwɔ mu nyinaa,+ wo na woyɛe. 12 Wo na wobɔɔ atifi fam ne anaafo fam;Tabor+ ne Hermon+ de anigye yi wo din ayɛ. 13 Tumi wɔ wo basa mu,+Wo nsa yɛ den,+Na woama wo nsa nifa so kɔ soro.+ 14 Trenee ne atɛntrenee yɛ w’ahengua nnyinaso;+Ɔdɔ a enni huammɔ ne nokwaredi wɔ w’anim.+ 15 Anigye ne ɔman a wɔbɔ ose.+ O Yehowa, w’anim hann mu na wɔnantew. 16 Wo din ma wodi ahurusi daa nyinaa,Na wo trenee ma wonya anuonyam. 17 Wone wɔn ahoɔden+ ne wɔn anuonyam,Na w’adom ma yɛn ahoɔden yɛ kɛse.*+ 18 Yɛn kyɛm yɛ Yehowa dea,Na yɛn hene yɛ Israel Kronkronni no dea.+ 19 Saa bere no wokasa kyerɛɛ w’anokwafo wɔ anisoadehu mu sɛ: “Mama otumfo bi ahoɔden;+Mapaw obi afi ɔman no mu, na mama no so.+ 20 Mahu m’akoa Dawid;+Mede me ngo kronkron asra no.+ 21 Mede me nsa beso no mu,+Na me basa bɛhyɛ no den. 22 Ɔtamfo biara rentwa tow mma no,Na ɔbɔnefo biara renhyɛ no so.+ 23 Mɛyɛ n’atamfo pasaa wɔ n’anim,+Na wɔn a wokyi no no, mɛka wɔn agu.+ 24 Medi no nokware na mada ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ no,+Na me din bɛma n’ahoɔden ayɛ kɛse.* 25 Mede po bɛhyɛ ne nsa,Na mɛma ne nsa nifa adi nsubɔnten so.+ 26 Ɔbɛka akyerɛ me sɛ: ‘Wone m’Agya,Me Nyankopɔn, ne me nkwagye Botan.’+ 27 Mede no bɛyɛ abakan,+Na ɔbɛyɛ kɛse asen asaase so ahemfo nyinaa.+ 28 Mɛma me dɔ a enni huammɔ ne no atena daa,+Na apam a me ne no ayɛ no rensɛe da.+ 29 Mɛma n’aseni* atim daa,Na n’ahengua bɛkyɛ te sɛ ɔsoro.+ 30 Sɛ ne mma po me mmaraNa wɔannantew m’atemmusɛm mu, 31 Sɛ wobu m’ahyɛde soNa wɔanni me mmara nsɛm so a, 32 Ɛnde wɔn asoɔden nti, mede abaa bɛtwe wɔn aso,+Na wɔn mfomso nti, mɛhwe wɔn. 33 Nanso meremfa me dɔ a enni huammɔ nkame no da,+Na me bɔhyɛ nso, meremmu so da.* 34 Meremmu m’apam so,+Na merensesa m’anom asɛm.+ 35 Meyɛ kronkron; maka ntam no nko ara de, na maka;Merentwa Dawid nkontompo.+ 36 N’aseni* betim afebɔɔ,+Na n’ahengua bɛkyɛ te sɛ owia wɔ m’anim.+ 37 Ebetim hɔ daa te sɛ ɔsram,Na ayɛ sɛ ɔdansefo nokwafo a ɛwɔ wim.” (Sela) 38 Nanso wo mmom na woapo nea woasra no no, na woatow no akyene;+Wo bo afuw nea woasra no no. 39 Apam a wo ne w’akoa ayɛ no, woama ayɛ atantanne;Woatow n’ahenkyɛw* ato fam ama ɛho agu fĩ. 40 Aban a ɔde abo ayɛ no, woabubu ne nyinaa agu;N’abannennen nso, woasɛe no pasaa. 41 Wɔn a wɔretwam nyinaa fom ne ho nneɛma;N’anim agu ase wɔ wɔn a wɔte bɛn no no anim.+ 42 Wɔn a wɔne n’ani nhyia no, woama wɔadi nkonim;*+Woama n’atamfo nyinaa adi ahurusi. 43 Afei nso, woama ne sekan aka ne nsam,Na woamma wannyina wɔ akono. 44 Woasɛe n’anuonyam,Na woatow n’ahengua akyene fam. 45 Woatwa ne mmerantebere nna so;Woafura no animguase. (Sela) 46 O Yehowa, wode wo ho besie akosi da bɛn? Afebɔɔ anaa?+ W’abufuw bɛkɔ so adɛw sɛ ogya? 47 Kae sɛ me nkwa nna yɛ tiaa.+ Asaase so nnipa nyinaa, wobɔɔ wɔn kwa anaa? 48 Onipa bɛn na ɔte ase a ɔrenwu da?+ Obetumi agye ne ho* afi Ɔdamoa* nsam anaa? (Sela) 49 O Yehowa, ɔdɔ a enni huammɔ a bere bi wodaa no adi,Nea wo nokwaredi nti wokaa ho ntam kyerɛɛ Dawid no,+ ɛwɔ he? 50 O Yehowa, kae sɛnea nkurɔfo atwa wo nkoa adapaa;Hwɛ sɛnea masoa aman pii adapaatwa.* 51 O Yehowa, hwɛ sɛnea w’atamfo ayeyaw me;Baabiara a nea woasra no no bɛfa no, wɔyeyaw no. 52 Ayeyi nka Yehowa daa. Amen ne Amen.+
^ Anaa “bɛtena hɔ daa.”
^ Nt., “ma yɛn abɛn so.”
^ Nt., “bɛma n’abɛn so.”
^ Nt., “Na me nokwaredi nso, meremma ɛnnan atoro.”
^ Nt., “woama wɔn nsa nifa so.”
^ Nt., “masoa aman pii adapaatwa wɔ me kokom.”